Izikhwama → Izingubo zokukhangisa
Izikhwama zokukhangisa iyindlela enhle yokukhangisa, kepha futhi iyinkampani ebonakalayo. Isikhwama esinemidwebo esezingeni eliphakeme, yize sisetshenzisiwe, sizomela umkhiqizo isikhathi eside.
Izikhwama zokukhangisa eziphrintwe ngenqubo yokukhangisa ephelele
Amagajethi awusizo zihlala ziyisipho esamukelekile, futhi ngenxa yefomu lazo elilula, zinika amandla ukumaka cishe nganoma iyiphi ihluzo nanoma iyiphi indlela yokumaka. Ngenxa yemikhiqizo enjalo yokuphromotha, lo mkhiqizo ungathola ukuthandwa okwengeziwe nezithameli ezintsha. Lesi yisixazululo esihle kakhulu uma iklayenti lingafuni ukuchitha imali eningi ekukhangiseni.
Izikhwama zingenye yezindwangu zokukhangisa ezishibhile, futhi ngasikhathi sinye ziyamelana nezinto ezingezinhle ezingaphandle. Ngaphezu kwalokho, lapho sisebenzisa izikhwama ezingasetshenziswa kabusha, sinakekela imvelo, okufaka ukufudumeza isithombe senkampani. Imibala ehlukahlukene ikuvumela ukuthi ukhethe imikhiqizo ngemibala yenkampani noma yeklabhu. Izindleko eziphansi zezikhwama kanye nokufakwa ilebula nakho kungaba isipho esihle sabangane noma umndeni ngesikhathi samaholide noma eminye imicimbi.
Sinezikhwama ze-in-mold esitolo izikhwama ezinemibala ye-fluorescent ophuzi ngomugqa ongakhombisi. Isiphakamiso esinjalo sengeza ukwengeza ukubonakala, ikakhulukazi ngezikhathi zasekwindla nasebusika zonyaka nangemva kokumnyama. Ngenxa yezintambo, isikhwama singabekwa ngemuva futhi ngaleyo ndlela sandise ukubonakala kwaso emgwaqeni.
Inkampani yethu inepaki yayo yemishini. Siyakwazi ukwenza ukuphrinta imifekethiso yekhompyutha, ukuphrinta kwesikrini noma ukudluliswa kwe-thermo, okwenzelwe okulindelwe iklayenti.
Uhlelo oluhlukile lulungiselelwe umdwebo ngamunye, ngesisekelo lapho ukumakwa okuqondile kwendwangu kwenziwa khona. Siyaqiniseka ukuthi umphumela uzohlangabezana nokulindelwe, ngisho nathi sinesiqiniseko sokuthi umphumela wokugcina uzojabulisa ngisho nokufuna kakhulu.
Ngenxa yemidwebo eyenziwe ngokwezifiso, umkhiqizo uzothola ukubukeka okuhlukile. Idizayini enjalo ayihlali ingenandaba nabamukeli. Sinikeza amamodeli ahlukahlukene atholakala ngemibala eminingi. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi ukuphathaokuzophakamisa inketho enhle kakhulu.
Izikhwama zokukhangisa banenzuzo yabo enkulu - amanani aphansi. Kungenxa yezindleko eziphansi okwenza abantu abaningi bakhethe lo mkhiqizo kuma-oda aphezulu okusabalalisa. Ukusetshenziswa kwazo okuhlukahlukene kukuvumela ukuthi wenze amasheya angasetshenziswa noma ngasiphi isikhathi sonyaka nanoma yiziphi izimo. Ngaphezu kwalokho, esimweni sokuphrinta, inani lincike kwivolumu - uma i-oda likhudlwana, intengo yeyunithi yehla.
Sinikeza ukulinganiswa kwephrojekthi yamahhala futhi esheshayo. Kusetshenziswe izingqimba eziqinisiwe nezinto eziqinile ukuthunga izikhwama, konke ngenhloso yokunciphisa amathuba okudwengula nokulimala nokunikeza umkhiqizo ozosebenza izinyanga eziningi.
izikhwama zikakotini ezinokuphrintaizikhwama ze-eco eziphrintiweizikhwama ze-eco ezinokuphrinta kwakhoizikhwama ze-eco eziphrintiweizikhwama zelineni ezinokuphrintaizikhwama zamaphepha eziphrintiweizikhwama zikakotini eziphrintiweizikhwama zikakotini ezinoluhlu lwamanani aphrintiweizikhwama zikakotini ezinokuphrinta kweLublinizikhwama zikakotini ezinokuphrinta kweWarsawizikhwama zikotini ngephrinta yakhoizikhwama zikakotini ezinombhalo wakho weWarsawizikhwama ze-eco eziphrintiweizikhwama zikakotini zemvelo ezinokuphrintaizikhwama ze-eco eziphrintiweizikhwama ze-eco ezinokubukeka kwakhowezwa izikhwama ezinokuphrintaucwecwe izikhwama nge ukuphrintaizikhwama ze-foil ezinoluhlu lwamanani wokushicilelaizikhwama laminated nge ukuphrintaizikhwama zelineni ezinokuphrintaizindwangu zezindwangu ezinokuphrintaizikhwama zokuthenga ezinokuphrintaizikhwama zamaphepha eziphrintiweizikhwama zamaphepha ezinokubekwa nge-etigroephrintiwe iphepha izikhwama uhlu lwamananiizikhwama zamaphepha ezinokuphrinta kweKrakowizikhwama zamaphepha ezine-poznań yokuphrintaephrintiwe iphepha izikhwama umenziizikhwama zamaphepha eziphrintiwe ashibhileizikhwama zamaphepha ezinokuphrinta kweWarsawizikhwama ze-canvas ezinamazwibelaizikhwama ze-canvas ezinokushicilelwa kwakhoizikhwama ze-polypropylene ezinokuphrintaIzikhwama zezipho ezinokuphrintaephrintiwe amaphepha okukhangisa amaphephaizikhwama zephromoshini eziphrintiweizikhwama zokukhangisa ezinoluhlu lwamanani entengoizikhwama zokukhangisa nge-poznań ephrintiweizikhwama zokuphromotha nge-Warsaw ukubhalaizikhwama zokukhangisa ezinama-wintł wintłizikhwama zenhlanga eziphrintiweizikhwama zendwangu eziphrintiweizikhwama eziphrintiweizikhwama ezinemibhalo ephrintiweizikhwama eziphrintiwe ngokwezifisoizikhwama ezibhaliwe - ezingabizi kakhuluizikhwama ngeWarsaw ukuphrintaizikhwama ngephrinta yakhoizikhwama zokuthenga ezinokuphrinta